China silica high fiberglass ngelaphu Ukwenziwa kunye Factory | Jiashun
Ifayibha ephezulu yesilika yelitye enqabileyo luhlobo lobushushu obuphezulu obumelana nefayibha. Umxholo wayo wesilica ungaphezulu kwe-96%, kwaye indawo yayo yokuthambisa ikufutshane ne-1700 ℃. Ingasetyenziswa kuma-900 ℃ ixesha elide. Ingasebenza ngo-1450 ℃ kangangemizuzu eli-10, kwaye i-worktable isenokuba kwimeko entle ngo-1600 ℃ kangangemizuzwana eli-15. Isilica ephezulu yelinen yefayibha ebonakalayo ineempawu zamandla aphezulu, ukuqhubekeka ngokulula kunye nokusetyenziswa okubanzi. Ingasetyenziselwa njengobushushu obuphezulu obunganyangekiyo, ukunganyamezeli kokufuduka, ukufudumeza ubushushu kunye nezinto zokufudumeza thermal ezinokuqhuba okuphantsi kwe-thermal, uzinzo lweekhemikhali olulungileyo, ukusebenza kakuhle kombane, ukufudumeza okuphantsi kwe-thermal, iimveliso ze-asbestos, akukho kungcoliseka kwendalo kunye nokusebenza kakuhle
1. Ukuba ufuna ukwazi iinkcukacha zeemveliso, amaxabiso kunye nolwazi lokuhambisa malunga nezinye iimveliso, sinokunikezela ngazo.
2. Ukuba amaxabiso ethu kunye nenkonzo yamkelwe nguwe, unganxibelelana nathi ngeesampulu zokujonga umgangatho, ngokuqinisekileyo sinokubonelela, mhlawumbi ezinye simahla.
3. Ukuba unengxaki nomhambisi phambili, sinokunxibelelana nabathumeli bakho ukuba balungiselele ukuhambisa ngenqanawa kwaye benze ukuhanjiswa ngokutyibilikayo.
4. Ukuba ufuna ukufumana okanye ukukhangela ezifanelekileyo okanye ezinye iimveliso zenze intengiso yethu, singakwazi apha ukukhangela ukuba ugcine iindleko kunye nexesha.
A: Siyimveliso kunye nenkampani yokurhweba, sinomzi-mveliso wethu kwaye ngeli xesha sinokunceda abathengi ukuba bafumane izinto ezilungileyo kwimarike yeli lizwe kwaye bazithumele kunye, ukugcina iindleko zabathengi.
Q2: Ngaba unikeze iisampulu?
A: Ewe, sinokunikela isampuli ngokwemfuno zabathengi.
Q3: Ndingalindela ixesha elingakanani ukufumana iisampulu?
A: Emva kokuba uhlawule intlawulo isampula uze usithumelele ulwazi oluqinisekisiweyo, iisampulu ziya kuba zilungile kwisithuba seentsuku 7-10. Iisampulu ziya kuthunyelwa kuwe ngokudlulisa kwaye zifike kwiintsuku ezingama-3-5.
Q4: Lide kangakanani ixesha lokuhambisa kwakho?
A: Ngokuqhelekileyo iintsuku ezili-15 ukuya kwezi-20.
Q5: Athini amagama akho okuhlawula?
A: Rhoqo i-30% T / T kwangaphambili, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa.
Egqithileyo Ilaphu lefoyile yeAluminiyam
Okulandelayo: Ilaphu le-vermiculite camera